300kg, 500kg, 1000kg orinasa mpamokatra afon-tsolika varahina
Home / Induction Melting Furnace / Fitrandrahana famonoana menaka / Lafaoro mitsonika varahina
Sokajy: Fitrandrahana famonoana menaka, Electric Furnace, Induction Melting Furnace, Afo Fandoroana vy Tags: fanangonam-bozaka varahina, Copper Felt, Fitrandrahana famonoana menaka, lafaoro fandrefesana varahina, varahina varahina, induction lafarinina varahina, Afokasoka famokarana varahina, Indraindray ny hafanana varahina varahina, famonoana menaka fanosorana varahina
200kg ^ 3000kg Induction fantsoratry ny varahina varahina varahina dia ampiasaina betsaka ho an'ny vatosoa sy ny varahina varahina, varahina ary ny kitapo varahina, varahina varahina, varahina varahina, sns.
Serasera connexion Midika famokarana varahina midadasika ny hafanam-pandrefesana varahina ho an'ny alimina dia natao manokana ho an'ny fikorontanan'ny metaly ambany kokoa, amin'ny fampiasana tsara ny mari-pamantarana marina sy ny fizarana ny hafanana. Tena zava-dehibe amin'ny famoahana metaly tahaka ny varahina, varahina, varahina raha tianao ny hitazona ny androm-piainana lavitr'andriana, varahina ary ny kalitaony. Ny fofona fialofana tsara indrindra ho an'ny varahina / varahina dia hanome ny mari-pahaizana momba ny fandrefesana mazava tsara mba hahatratrarana io tanjona io.
Afividianana lafaoro afovoan'ny alim-pandrefesana elektromagnetika / lafaoro fanamainana varahina amin'ny induction:
1, manangom-pahefana ary mampihena ny mari-pahaizana momba ny tontolo iainana
Ny atrikasa fitrandrahana an'habakabaka voalohany momba ny fandotoana, fa koa ny fantsom-pamokarana famonoan-tena, ao anaty sy ivelan'ny hafanana fandefana dia be dia be ao amin'ny atrikasa, ka miteraka atrikasa avo lenta. Toy izany koa ny fefin'ny fitrandrahana tany am-piandohana, ny ankamaroany dia mandositra any amin'ny rivotra, misy ny fahaverezan'ny fitarafana hafanana, ny famokarana angovo lehibe, hampitombo ny vidin'ny famokarana. Mandritra izany fotoana izany dia mihamitombo ny mari-pahaizana. Ny fizotry ny famokarana herinaratra elektroagnetika, ny elanelan'ny fanamainana dia amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny hafanana, mba hampihenana ny fahaverezan'ny fitantanana hafanana, ny fikolokoloana haingana, ny famoahana haingana, ka hampihena ny fampiasana angovo. Alao ny fihinanana herinaratra. Aorian'ny fampitahana ny fanandramana sy ny fanovana ny fanandramana, dia ny 20% -40% ny vokatra mahavonjy.
2, Fanaraha-maso haingana, fitiliana ara-potoana marina
Ny fitaovana fanasitranana electromagnetika dia amin'ny alàlan'ny tsipika maoteran-tsambo no manasitrana haingana haingana, ny haingam-pandehan'ny Aluminium. Ny fanaraha-maso ny mari-pana dia ara-potoana sy marina, izay manatsara ny kalitaon'ny vokatra ary manatsara ny famokarana vokatra!
3 sy fiainam-panompoana lava, fikolokoloana tsotra
Ny fomba fampiasa amin'ny herinaratra elektrônika nentin-drazana dia ny fampiasana ny fanamafisana ny filaminana, ny filaminana mitam-piaramanidina ao amin'ny tontolo midadasika avo lenta mandritra ny fotoana maharitra amin'ny fampiasana oxidation dia miteraka ny fampihenana ny fiainam-panompoana, ny fikojan'ny fikojakojana. Ny famokarana herinaratra fanodinana elektiragneta dia vita amin'ny fanjohian-tsambo sy ny telegrama avo lenta, noho izany ny fiainana an-trano dia lava ary tsy misy fikojakojana.
Ny famokarana indostrian'ny elektromagnetika miaraka amin'ny fampandrosoana sy ny fahamatoran'ny teknôlôjia, ny fizotry ny famokarana sy ny teknôlôjia, ny rindrambaiko, toy ny fiarovana azo antoka ny hery ankehitriny, dia 2-200KW.
5, azo antoka
Ny modelim-pitaovana dia manosika ny fanasitranana amin'ny indostrian'ny elektromagnetika, izay mety hampihenana ny faharetan'ny milina eo amin'ny milina, ary ny vatan'olombelona dia azo antoka fa voakasika, mba hisorohana ny fisian'ny biriky sy lozam-pifamoivoizana vokatry ny fomba fanalezana mahazatra ary hiarovana ny fiarovana ny vokatra ny mpiasa.
Mitsitsy angovo 1 sy fiarovana ny tontolo iainana, fitaovana herinaratra IGBT any Alemana, azo itokisana be, fandidiana azo antoka ary vidin'ny fikojakojana ambany.
2) ny fatran'ny fitazonana ho an'ny paikady mifandraika amin'ny dizitaly, mifanandrify amina mari-pamantaran-dresaka.
3 ny fitantanana ny fametahana herinaratra, mba hisorohana ny fiovan'ny hafana vokatry ny herinaratra.
4) amin'ny alàlan'ny tsipika, eo ambanin'ny tsipika, tsy fahampian'ny taom-piofanana, manomboka amin'ny ankehitriny, amin'ny fiarovana ny hafanana, fampirimana amin'ny sehatr'asa eo amin'ny mari-pahaizana, fandrefesana diso sy fanairana; Fanairana alaomina, manafoana ny famatsian-koditra sy ny toetr'andro amin'ny ora tena izy.
5) rafitra fanamafisam-peo PID, fakan-drivotra fanamorana miavaka, manakana ny fiakaran'ny hafanam-bolan'ny alim-bary, ny lelany matevina, ny homogenny metal metatra mba hanatsarana ny tahan'ny kalitao vokatra.
6 (LED) ny mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana digital, mandanja sy manara-maso ny mari-pahaizana ara-pahasalamana eo amin'ny 3 degrees centigrade, ny hatsaran'ny sira aluminium dia tsara, mihamitombo haingana ny hafanana mangatsiaka, ny fakan-tsakafo dia mora mifehy, avo ny famokarana;
7) ny endriky ny fotodrafitr'ireo menaka polycrystalline mullite amin'ny lafaoro, volomparana kely, fananana fanangonan-tsakafo, fihenan-tsakafo ambany, fahombiazana ambony, mari-pototra mihoatra ny 1200, lava-pahavitrihana;
8. Ny fampiharana dia tsotra ary ny fahefana dia afaka ampifanarahana amin'ny asa;
9 (100%) ny faharetan'ny famandrihana, hery ambony indrindra, mba hiantohana ny fandehan'ny ora 24.
Fiatrehana hafanana ny seranana SMJD Connection Mid Frequency induction varahina / varahina / varahina fandoroana varahina:
Type fahan'ny Power Fiatoana Max Temperature
stahl, tsy misy vy varahina, volamena, volafotsy (hosodoko, slag) aluminium, aluminium legale,
Aluminium hosodoko, ala maina, pop can
Aluminum Scraps Fanodinana ny fitrandrahana
SMJD fandrefesana fandrefesana fonosana famonoana
Aluminium, Copper, Fitaovam-pamokarana vy fanodinana vy
[pdf-embedder url = "https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/12/AluminumCopperIron-Induction-Melting-Furnace-manual.pdf" lohateny = "Aluminium, Copper, Iron Induction Melting furnace boky "]
Aluminium Fitrandrahana Aluminium 400kg
Magnetic Induction Aluminium Fitrandrahana aluminium, 300kg, 500kg
Fitrandrahana metaly afon-koditra